यस्तो छ विश्वको पहिलो फोल्ड गर्न मिल्ने फोन, फोल्ड गरेर दुबै भागको स्क्रीन प्रयोग गर्न सकिने !!! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
यस्तो छ विश्वको पहिलो फोल्ड गर्न मिल्ने फोन, फोल्ड गरेर दुबै भागको स्क्रीन प्रयोग गर्न सकिने !!!
काठमाडौँ । पछिल्ला निकै दिनहरुदेखि फोल्ड गर्न मिल्ने फोन आउने चर्चा भएपनि अझसम्म त्यस्तो फोन आएको थिएन् । अझ सामसंग, ह्वावे, एलजीलगायतका कम्पनीहरुले फोल्ड गर्न सकिने फोन ल्याउने चर्चाका बिचमा पनि त्यस्तो फोन निर्माणको क्रममा नै रहेको जानकारी दिँदै आएका थिए । तर अहिले नामै नसुनिएको चिनियाँ कम्पनीले फोल्ड गर्न मिल्ने फोन बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी रोयोले टेक्नोलोजीले (Royole Technology) विश्वको पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन लन्च गर्ने भएको छ ।
रोयू टेक्नोलोजीले ल्याउने सो फोनको नाम ‘फ्लेक्स पाई’ (FlexPai)भनिएको छ ।
यो स्मार्टफोन एउटा ट्याबलेटको जस्तो आकार र डिजाइनमा छ, जसलाई पूर्ण आकारमा अनफोल्ड गरेर हेर्दा ७.८ इन्चको डिस्प्ले प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि यो ट्याबलेटलाई फोल्ड गरेर प्रयोग गर्ने हो भने यसमा ४ इन्चको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ ।
रोयू टेक्नोलोजीले यो फोनमा एमोलेड डिस्प्लेको प्रयोग गरेको छ भने यसलाई दोब्य्राएर समेत दुबै तर्फबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोयडमा आधारित कस्टम भर्सनमा संचालन हुन्छ, जसलाई वाटर ओएस भनिएको छ ।
फोनमा फोटोको लागि ड्यूल क्यामरा सेटअप राखिएको छ, जसमा १६ प्लस २० मेगापिक्सेलको सेन्सर छ । यी क्यामराहरुलाई सेल्फी र भिडियोका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्मार्टफोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन ८१५० प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ भने ६ जीबी र्याम र १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज हुनेछ । यो स्मार्टफोनमा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलोजी र चार्ज प्रयोग गरिएको छ, जसले एक घण्टामा नै ८० प्रतिशत चार्ज गर्न सक्दछ । त्यसैगरि यसमा टाइप सी सपोर्ट पनि उपलब्ध छ ।
फोल्ड गर्न सकिने स्मार्टफोन हाल ग्राहकहरुका लागि समेत उपलब्ध हुने भएको छ । यो फोन डिसेम्बरमा उपलब्ध हुने र यसको मूल्य ८,९९९ यूआन तोकिएको रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ ।
लोकसेवाले माग्यो २ सय ९६ अधिकृत
लगानीकर्ताले आजदेखि अनलाईमार्फत सेयर कारोबार गर्न पाउने